नेकपा ‘कुलिङ’ को सट्टा ‘हिटिङ पिरेड’मा : बाबुराम
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विवादलाई हिटिङ पिरेड भन्नुपर्ने बताएका छन् ।
मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकले पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्न १० दिनको म्याद दिएको छ । कतिपयले यसलाई कुलिङ पिरेडको संज्ञा दिइराखेका बेला बाबुरामले यो हिटिङ पिरेड भएको बताएका हन् ।
कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै ओलीले मंसिर ३ को सचिवालय बैठकमा १० दिनको म्याद मागेका हुन् । ओलीले प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई आरोप पत्रको संज्ञा दिएका छन् । यही प्रतिवेदनका कारण नेकपा फुटको संघरामा पुगेको छ ।
बाबुरामले द्वन्द्ववादको नियमले संघर्ष र रुपान्तरणको कुरा गर्ने र माओले अझ ठूलो माछाले सानो माछा निल्नु रुपान्तरण हो भनेको सम्झदै यस्तो बताएका हुन्।
बाबुरामले धर्मशास्त्रले समेत संघर्षबाटै असन्त्यमाथि सत्याको जितको कुरा गरेको भन्दै अहिले नेकपालाई दिइएको समय कुलिङ नभएर हिटिङ पिरेड भएको बताएका हुन् ।
नेकपाभित्रका केहीले’cooling period’को कुरा गरेको बुझिएन।द्वन्दवादको नियमले त एकता-संघर्ष-रूपान्तरणको कुरा पो गर्छ त!अझै माओ त ठूलो माछाले सानो माछा निल्नु रूपान्तरण हो भन्थे।धर्मशास्त्रले पनि संघर्षबाटै असत्यमाथि सत्यको जितको कुरा गर्छ', बाबुरामले ट्वीटरमा लेखेका छन्, 'त्यसैले cooling सट्टा Heatingभन्नुपर्ने हैन र ?'
प्रकाशित मिति : मंसिर ६, २०७७ शनिबार ६:४२:२६,